कैँचीवाली दिविसाको शलुनमा करिश्मादेखि जड्याहाहरुको लाईन, कमाँउछिन मासिक ४ लाख बढी, पैसा कुन बैँकमा राख्छिन् ? (भिडियो) - Enepalese.com
कैँचीवाली दिविसाको शलुनमा करिश्मादेखि जड्याहाहरुको लाईन, कमाँउछिन मासिक ४ लाख बढी, पैसा कुन बैँकमा राख्छिन् ? (भिडियो)
इनेप्लिज २०७५ फागुन १ गते २२:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मानिसलाई जीविकोपार्जनका लागि पैसा आवश्यक पर्छ । पैसा कमाउने धेरै तरिका र कला पनि मानिसले नै जानेको हुन्छ । मानिसले कर्म गर्नुपर्छ, आफूले गर्ने कामप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । साथै धर्यता र लगाव भएमा मानिसलाई आर्थिक अभाव हुँदैन, यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, दिभिशा शर्मा । उनी महिला हुन्, तर पुरुष र महिला दुवै कपाल काट्छिन् ।
उनी नेपालको चर्चित हेयर डिजाइनर हुन् । काठमाडौंको न्यूरोडमा उनको पार्लर छ । एक पुरुष र तीन जना महिला गरी चार जनालाई रोजगारी समेत दिएकी दिभिशाले मासिक करिब चार लाख रुपैयाँ कमाउँछिन् । पछिल्लो समय कैँचीवालीको नामले चर्चित रहेकी दिभिशासँग ओएसनेपालले उनको व्यवसायसहित समग्र विषयमा गरेको कुराकानी यस भिडियोमा हेर्नुहोस् :